तिथि मेरो पत्रु » एक पत्रु रहनेवाला पत्ता लगाउने
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: सक्छ. 25 2020 |3मिनेट पढ्न
तपाईं जानुमा अर्को समय, यो व्यापार या खुशी को लागि हो कि, तपाईं एक भर्ती विचार गर्न सक्छन् पाल्तु जनावर बस्छन आफ्नो घरपालुवा जनावरको हेरचाह गर्न आफ्नो घरमा आउन. एक व्यावसायिक पाल्तु जनावर रहनेवाला को सेवा रोजगार आफ्नो पाल्तु जनावर आफ्नै घर मा आरामदायी रहन अनुमति हुनेछ, सक्षम हातमा उहाँले सुरक्षित छ जान्नु र तिम्रो मन को शान्ति दिन्छ, र मित्र वा आफन्त भर पर्नु भएको देखि तपाईं मुक्त. तपाईं आफ्नो चाबी हात र यद्यपि रोवर र शराबी अलविदा लहर अघि, पाल्तु जनावर Sitters र तिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवाहरू बारे आफैलाई शिक्षित समय लिन. केही पाल्तु जनावर Sitters साक्षात्कार, तिनीहरूलाई एक बिट चिन्न, र प्रश्नहरू सोध्न. आफ्नो अनुभव बारे मा ठेगाना, तिनीहरूले आफ्नो जान्छन् छौँ कसरी बारम्बार, कसरी लामो भ्रमणबाट अन्तिम, तिनीहरूले आफ्नो घरपालुवा जनावरको संग जबकि गर्न छौँ के, तिनीहरूले आकस्मिक ह्यान्डल छौँ कसरी, र शुल्क. आफ्नो सेवाहरू बारे सामान्य जानकारी अलावा, तपाईं केही धेरै महत्त्वपूर्ण बुँदा ढाक्ने गर्न चाहनुहुन्छ छौँ, तल दिइएका रूपमा.
– बीमा र / वा सम्बन्ध: यो के भइरहेको देखि दुर्घटना रोक्न छैन तर एक दुर्घटना हुन गर्नुपर्छ तपाईं र एक निश्चित हद सम्म पाल्तु जनावर रहनेवाला रक्षा गर्नुहुनेछ. सबैभन्दा एकमात्र proprietors बीमा हो, र पाल्तु जनावर Sitters रोजगार सबैभन्दा सेवाहरू बंधुआ र बीमा हो. यो बीमा प्रमाण लागि सोध्नु राम्रो विचार हो.
– पत्रु आकस्मिक साधनहरू: तपाईं दूर छौं जब आफ्नो पाल्तु जनावर बिरामी हुन्छ भने, तपाईं पुग्न सक्दैन भने यो लिन कस्ता कदमहरू थाह आफ्नो पाल्तु जनावर रहनेवाला लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछु. त्यो या त्यो आफ्नो पशु चिकित्सक सम्पर्क जानकारी हुनुपर्छ, र उपचार र / वा प्रकार तपाईं संपर्क गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईं अधिकार बराबर.
– पत्रु रहनेवाला आकस्मिक प्रक्रियाहरु: आफ्नो पाल्तु जनावर रहनेवाला बिरामी हुन्छ र आफ्नो घरपालुवा जनावरको हेरचाह गर्न असमर्थ छ भने लगिनेछ कस्ता कदमहरू सोध्नुहोस्, तिनले कारण inclement मौसम आफ्नो घर प्राप्त गर्न असमर्थ छ भने, वा प्राकृतिक प्रकोप को घटना मा.
– प्रमुख सुरक्षा: प्रमुख पहिचान र भण्डारण गरिनेछ कसरी सोध्नुहोस्. तरिकाहरू मा आफ्नो नाम वा ठेगाना संग केहि गर्न संलग्न हुँदैन, र जब छैन प्रयोग, आदर्श उनि एक लक सुरक्षित वा अन्य सुरक्षित बाडे मा सुरक्षित राख्नुपर्छ. सबै भन्दा पालतू बसिरहेका कारोबार पनि भविष्य पाल्तु जनावर बसिरहेका भाषणका लागि आफ्नो प्रमुख राख्न प्रदान गर्नेछ.
– सम्झौता र अन्य प्रकारका: आफ्नो पाल्तु जनावर रहनेवाला मिति जस्ता कुराहरू विस्तृतीकरण करारनामा प्रदान भन्ने निश्चित हुनुहोस्, पटक, सेवा सहमत, आकस्मिक प्रक्रियाहरु, प्रमुख सुरक्षा, दर, आदि.
– सन्दर्भ: नाम लागि सोध्नुहोस् र केही ग्राहकहरु लागि सम्पर्क. यी मानिसहरू कुरा गर्न समय लिनुहोस् र आफ्नो अनुभव बारे मा सोध्नु र या छैन तिनीहरूले फेरि त्यस विशेष पाल्तु जनावर रहनेवाला किराया चाहन्छु. धेरै पाल्तु जनावर Sitters पनि यस्तो पशु चिकित्सकहरु अन्य पाल्तु जनावर हेरचाह व्यवसायी देखि उल्लेख दिन खुसी छन्, groomers, वा प्रशिक्षकहरु.
– विषयहरूमा पालतू: कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या को आफ्नो जनावर पाल्ने रहनेवाला सूचित, व्यवहारिक विषयहरूमा, वा अन्य महत्त्वपूर्ण कारक आफ्नो जान्छन्. रूपमा तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर बारेमा धेरै जानकारी रूपमा आफ्नो पाल्तु जनावर रहनेवाला सक्छन् दिने सर्वोत्तम हेरविचार दिन उनको सक्षम हुनेछ.
– घर विषयहरूमा: पाल्तु जनावर विषयहरूमा जस्तै, तपाईंको अभाव उत्पन्न हुन सक्छ कि आफ्नो घर को बारे मा कुनै पनि ओडिटीज को आफ्नो पाल्तु जनावर रहनेवाला सूचित गर्न पक्का हुन (ओतप्रोत कि शौचालय, ठीक लक छैन भनेर ढोका, सुरक्षा अलार्म, आदि).
पाल्तु जनावर बैठक व्यक्तिगत सेवा हो किनभने, तपाईं र तपाईंको पाल्तु जनावर तपाईं आफ्नो घरमा निमन्त्रणा व्यक्ति सहज हुनु आवश्यक छ. एक निजी स्पर्श संग व्यावसायिकता को एक अर्थमा लागि हेर, खाता आफ्नो पेट महसूस मा लिन पक्का हुन, र तपाईं साक्षात्कार पालतू रहनेवाला आफ्नो पाल्तु प्रतिक्रिया पालन. तयारी र अनुसन्धान को एक थोडा संग, आफ्नो पाल्तु जनावर तपाईं दूर छौं जबकि आफ्नै घरमा सुरक्षित रहन सक्षम हुनेछ, र त्यहाँ हुनेछ फर्कनु उत्कट प्रेम र स्नेह संग तपाईं अभिवादन गर्न.